आफ्नी छोरीलाई स्तनपान गराउने पहिलो बुबा म्यासमिलियन ! – Satyapati
आफ्नी छोरीलाई स्तनपान गराउने पहिलो बुबा म्यासमिलियन !
बीबीसी । जुन महिनाको २६ तारिख, सन् २०१८ । अमेरिकाको विस्कनसिनमा बस्दै आएका एक परिवारमा नयाँ सदस्यको आगमन हुँदै थियो । अस्पतालको त्यो रात मात्र आमाको लागि महत्वपूर्ण थिएन । बुवाको लागि झन् विशेष थियो !
सुन्दै अचम्म ! के पुरुषले पनि महिलाको जस्तै बच्चालाई स्तनपान गराउन सक्छ भन्दा पत्याउनु हुन्छ ? तर, अमेरिकाको विस्कनसिनमा बस्ने पुरुषले आफ्नो परिवारमा पहिलोपटक छोरीलाई स्तनपान गराएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।
एप्रिल न्यूबोर्सको डेलिभरी त्यति सामान्य थिएन किनकी उनको ब्लडप्रेसर निक्कै उच्च थियो । उनी लामो समयदेखि प्री एक्लेन्पिसियाबाट ग्रसित थिइन् । यो विमार प्रायः गर्भवती महिलालाई हुने गर्छ । डेलिभरीको क्रममा उनको हालत नाजुक थियो । उनलाई सिजेरियन डेलिभरी गराउनुपर्यो ।
अबेर राति एप्रिलले छोरीलाई जन्म दिइन् । छोरीको नाम रोजेली राखियो । जन्मिएको समय रोजेलीको तौल ३.६ किलो थियो । तर छोरीको जन्मिएपछि नै अर्को मेडिकल समस्याले सताउन थाल्यो । एप्रिलले फेरि अस्पताल भर्ना हुनुपर्यो । उनी अस्पतालको अर्को बेडमा गएपछि आफूले जन्म दिएको नवजात शिशुलाई काखमा समेत राख्न पाइनन् ।
निप्पल लगाएर ब्रेस्टफिड
जब नर्सले बच्चाको आमाको खोजी गरिन्, त्यतिबेला आमा पाइनन् । आमाको साटो नर्सले उसको बुवा म्यासमिलियनलाई भेट्टाइन् । बुवा म्याक्समिलियनले भनेका छन्, ‘एउटी नर्स आफ्नो काखमा हाम्रो छोरीलाई काखमा लिएर आइन् । हामी नर्सको पछिपछि लाग्यौँ । म एक ठाउँमा बसे र आफ्नो सर्ट खोलेँ । किनकि म आफ्नी छोरीलाई स्पर्शको अनुभूति दिन चाहन्थेँ ।’
नर्सले भनिन्, ‘बच्चालाई केही न केही दिनपर्छ तथा औँलाले नै दूध पिउन लगाउनुपर्छ । कम्तीमा सुरुवात त गर्नु पर्छ ।’ यसपछि नर्सले मसँग सोधिन्, ‘के तपाई आफ्नो छातीमा निप्पल लगाएर ब्रेस्टफिड गर्न तयार हुनुहुन्छ ?’ त्यसपछि म यसको लागि तयार भएर भनेँ, ‘किन नसक्नु ?’
कसरी गराए ब्रेस्टफिड ?
नर्सले एउटा ट्यूबको मद्दतले एउटा प्लाष्टिक निप्पललाई उनको छातीमा लगाइदिइन् । उक्त ट्युबमा फर्मुला मिल्सले भरिएको एउटा सिरिन्ज जोडिएको थियो । ‘मैले यस्तो कहिल्यै पनि गरेको थिइन र सोचेको पनि थिइन कि यस्तो गर्नुपर्छ भनेर । म कुनै नवजात शिशुलाई पहिलो पटक ब्रेस्टफिड गराउने पुरुष भएँ ।’
‘जब मैले आफूलाई यस्तो अवस्थामा पाएँ, आफैँलाई विश्वास भइरहेको थिएन । केही समयमै मलाई मेरी छोरीसँग आफूलाई जोडिएको महसुस गर्न थालेँ । मैले उसलाई आफ्नो काखमा राखेँ र ब्रेःटफिड गर्न समस्या नहोस भनेर ध्यानपूर्वक लागिरहेँ,’ उनले बीबीसीसँग भने ।
उनले छोरीलाई ब्रेस्टफिड गराइरहेको तस्बिर सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र इन्स्टाग्राममा समेत राखे । उसको छातीमा एउटा ट्याटु बनाइएको थियो जसमा ‘आमा’ अर्थात ‘मोम’ लेखिएको थियो । उक्त पोष्ट सेयर गर्ने बित्तिकै उनलाई कमेन्ट आयो । एक युजरले कमेन्ट गरिहाले, ‘मोमको ट्याटुको ठीक तल‘ । त्यो उसको तस्बिरले नै बोलिरहेको थियो ।’
तर केही मानिसहरुले भने त्यो सबै बनाइदिने नर्सको पनि खुबै प्रशंसा गरेका थिए भने केहीले भने एउटा पुरुषलाई ब्रेस्टफिड गराउनु निक्कै अचम्मलाग्दो भएको बताए । म्याक्मिलियनको पोस्ट ३० हजारभन्दा बढी सेयर भएको छ भने सयौँ प्रतिक्रिया आएका छन् । म्याक्समिलियन भन्छन्, ‘मैले त्यही गरेँ जुन अवस्थामा एउटा बुवाले आफ्नो छोराछोरीको लागि गर्नु कर्तव्य हुने गथ्र्यो ।’